कहिलेकाहीँ रुनुको फाइदा जान्न चाहनु हुन्छ ? « Khabarhub
कहिलेकाहीँ रुनुको फाइदा जान्न चाहनु हुन्छ ?
कहिलेकाहीँ रुँदा तपाईंलाई आनन्द आउँछ ? विशेष गरी रुइँ सकेपछि मानिसहरुलाई मनमा आनन्द आउँछ । तर रुवाइका पनि विभिन्न पोटोहरु हुन्छन् । रुनु ठीक हो भन्नु हुन्छ भने यसबारे बुझिराखौँ ।
रुनु ठीक हो भन्नुका केही कारण छन् । हामीले तीन प्रकारका आँशु उत्पादन गर्दछौँ । रिफ्लेक्स (प्रतिबिम्ब) आँशुले बिझाइरहेका वस्तु बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छन् ।
किनभने मान्छेहरु सामाजिक प्राणी हुन् । र आँशुले हामीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । हामीले कुनै कुराप्रति कति लगाव राख्छौँ भन्ने सन्देश पनि त्यसले दिनसक्छ ।
रुँदा मानिसबीचको घनिष्टता बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तनाव र दुखाइ कम हुन सक्छ । त्यसका लागि तपाईंले रुनै पर्छ ।
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७६, बिहीबार ४ : २० बजे